မိခင်အစား အဖမ်းခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသား၊ မိခင်ပြန်လာ အဖမ်းခံသည့်တိုင် မလွှတ်ပေးဘဲ အမှုဖွင့် - Myanmar Pressphoto Agency
arrested MPA Myanmar News universitystudent Youth zalun
မိခင်အစား အဖမ်းခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားကို မိခင်ပြန်လာ အဖမ်းခံသည့်တိုင် အ​​ကြမ်းဖက် စစ်တပ်ကမလွှတ်ပေးဘဲ အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
ဇလွန်မြို့နယ်မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်သူဇာတင်ဦးကို ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ၂ရက် နေ့နံနံက်ပိုင်းတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လာရောက်ဖမ်းဆီးရာတွင် မတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက် နေအိမ်၌ရှိနေသည့် သားဖြစ်သူ ကိုထိုက်လင်းဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့​​ခြင်း ဖြစ်သည်။
သားဖြစ်သူကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့်အတွက် ညနေပိုင်းတွင် ဒေါ်သူဇာတင်ဦးက လာရောက်အဖမ်းခံခဲ့သော်လည်း သားဖြစ်သူကိုပြန်လွှတ်ပေးခြင်းမရှိပဲဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားကာ အမှုဖွင့်ထားကြောင်းကိုထိုက်လင်းဦးနှင့်နီးစပ်သူများထံမှသိရှိရသည်။
“သူ့ကိုကမနက်က ဖမ်းသွားတာပေါ့။ သူ့ကိုဖမ်းသွားတော့ ညနေမှာသူအမေကလာပြီးတော့ အဖမ်းခံတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်မလွှတ်ပေးတော့ဘူး။ သူ့ဖုန်းကိုစစ်လိုက်တော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတွေ့တဲ့ Comment အချို့ကြောင့် ဆက်ဖမ်းထားတယ်ဗျ“ ဟု ၎င်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကိုလင်းထိုက်ဦးနှင့် မိခင်ဖြစ်သူတို့ကို ၂၄ရက်နေ့တွင်ဟင်္သာတမြို့နယ်အချုပ်သို့ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ပြီး စွဲဆိုထားသောအမှုများကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
၎င်းတို့ကို မည်သည့်အမှုများဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်ကိုတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ မသိရှိရပေ။
ကိုလင်းထိုက်ဦးသည် မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်မှ ပဉ္စမနှစ်(PV)ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦး မဟုတ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ၂၈ရက်နေ့ကလည်း ဘားအံမြို့နယ်ရှိ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုတွင် လေကြောင်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုဟိန်းထက်ဝေယံသည် စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်တွင် နှိပ်စက်စစ်မေးခြင်းများ ခံနေကြောင်း လေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂက ဆိုသည်။
အ​ကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည့် လက်ရှိအချိန်တွင် လူငယ်များကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်နေသော လူငယ်များ၊ တက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သပိတ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများဆိုလျှင် ပိုမိုစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
အ​ကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် သွားရောက်ဖမ်းဆီးသည့်လူကိုမတွေ့လျှင် အိမ်တွင်ရှိနေသည့် လူများကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် အိမ်ကို မီးရှို့ခြင်းများပင် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းသည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့အထိ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသူများနှင့် စစ်ကြောရေးစခန်းများတွင်စစ်မေးရင်း သတ်ဖြတ်ခံရသူများ အပါအဝင် အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း ၁၃၀၀ကို သတ်ဖြတ်ထားကာ လူပေါင်း၁၀၀၀၀ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP)က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
Student Arrested on Mother’s Behalf Not Released but Sued Despite Mom Giving Herself in for Arrest
A student who was arrested on his mother’s behalf was not released by the terrorist military despite his mother giving herself in for arrest after returning home.
An activist in Zalun township, Daw Thuzar Tin Oo, was searched by the terrorist military on November2morning for arrest, but her son Ko Htike Lin Oo, who was present at home at the time, was arrested instead as his mother was not at home, according to those close to them.
As the son was arrested, Daw Thuzar Tin Oo returned home in the evening and gave herself in for arrest but her son was not freed, still detained and is sued, according to those close to Ko Htike Lin Oo.
“They were arrested in the morning. When he was arrested, his mother returned home in the evening and submitted herself for arrest, but he wasn’t freed. It was said that he was still detained because of some of his comments on social media”, said the one close to him.
Ko Lin Htike Oo and mother were transferred to Hinthada township prison on the 24th and their cases will be examined/heard online.
It hasn’t been known what charges they are being sued on.
Ko Lin Htike Oo isaPV first-year student of Myanmar Aerospace Engineering University and is learnt to be not an activist.
The students union of the Myanmar Aerospace Engineering University announced that the arrest of KO Lin Htike Oo was an unjust/arbitrary arrest.
These days, the terrorist military is carrying out arbitrary checks and arrests on young people.
They apply heavier checks on anti-military dictatorship youths and members of student unions from respective universities and strike groups.
If they cannot find the one they want to arrest, the terrorist military would arrest anyone present at home and would set the house on fire.
In Myanmar, from the time of the coup by the terrorist military on the 1st of February to December 1,atotal of 1300 innocent civilians have been killed in the shootings of the terrorist military including deaths at their interrogation camps and over 10,000 people are detained, reported by the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
#StudentArrestedOnMothersBehalf #DespiteMotherGivingHerselfInforArrest #NotReleasedbutSued #MPA